Sorbitol® (ဆောဘီတောလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sorbitol® (ဆောဘီတောလ်)
Sorbitol (ဆောဘီတောလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sorbitol® (ဆောဘီတောလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
sorbitol ကို မည်သည့် အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
sorbitol ကို ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်းတို့အတွက် ဝမ်းနုတ်ဆေးအနေဖြင့် အများဆုံး အသုံးပြုသည်။
sorbitol ကို ဘယ်လို သောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
sorbitol ကို ဘယ်လိုသိုလှောင် သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
sorbitol ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့ရန်၊ မစိုစွတ်မှုမရှိစေရန် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်စေရန် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ sorbitol ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသည့် ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘူးအခွံတွင် ပါသည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Adenosine triphosphate ကို အိမ်သာတွင်း ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့လျှင်၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားလျှင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ဆေးဝါးများအား စနစ်တကျ မည်သို့ စွန့်ပစ်ရမည် ဆိုသည်ကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
sorbitol ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
sorbitol တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် (ဆေးအညွှန်းတွင် အချက်အလက်များ အသေးစိတ်ပါဝင်သည်)
sorbitol နှင့်တွဲသောက်လျှင် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရောဂါများရှိလျှင်၊ ဆေးဝါးများသောက်သုံးနေလျှင်
sorbitol ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန် သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ sorbitol ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် N ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
sorbitol က ဘယ်လို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
တခြားဆေးများကဲ့သို့ sorbitol တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသည် အများစုမှာ မဖြစ်ပွားတတ်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲကုသခြင်းများ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ဆေးသောက်ပြီး ပြသနာတစုံတရာ ရှိပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
အချို့ဆိုးကျိုးများမှာ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက sorbitol နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ။
sorbitol သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသည့် ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် သို့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက sorbitol နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
sorbitol အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်မလာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါတွေဟာ sorbitol နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုရှိသလဲ။
sorbitol သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနျေနှင့် ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အောက်ပါရောဂါများရှိလျှင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အူရောင်ခြင်း၊ အူမကြီး အနာဖြစ်ကာ ရောင်ခြင်း၊ Crohn ရောဂါ၊ အူလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမသိရဘဲ ဗိုက်အောင့်ခြင်း
Fructose လက်မခံနိုင်သော မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါ
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ sorbitol ဆေးမသောက်သုံးမီ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ sorbitol ကို သောက်သုံးရမည့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
sorbitol hydrochloride နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ အောက်ပါ ပမာဏများသည် ထောက်ခံမှုပြုထားသည့် ဆေးပမာဏဖြစ်သည်။
အစာမကြေခြင်းအတွက် တနေ့လျှင် ၁ထုတ်မှ ၃ထုတ် အစာမစားမီ (သို့) အစာမကြေသည့်အခါ။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက် လူကြီးဆိုလျှင် မနက်ပိုင်း အစာမစားမီ ၁ ထုတ်သောက်နိုင်သည်။
လူကြီးများ ဝမ်းနုတ်ရန်အတွက် စအိုတွင် ထည့်သွင်းရသည့် sorbitol ဆေး ၂၀-၃၀% ၏ ၁၂၀ မီလီလီတာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ adenosine triphosphate ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
sorbitol hydrochloride နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။ အောက်ပါ ပမာဏများသည် ကလေးများအတွက် ထောက်ခံမှုပြုထားသည့် ဆေးပမာဏဖြစ်သည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက် လူကြီးသောက်သည့် ပမာဏ၏ တဝက်ကို ရေဖန်ခွက်တဝက်တွင် ဖျော်ပြီး အစာမစားမီ ၁၀မိနစ် ကြိုသောက်ပါ။
အသက် ၁၂နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများ ဝမ်းနုတ်ရန်အတွက် စအိုတွင် ထည့်သွင်းရသည့် sorbitol ဆေး ၂၀-၃၀% ၏ ၁၂၀ မီလီလီတာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၂နှစ်မှ ၁၁နှစ်အတွက် ၃၀-၆၀ မီလီလီတာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
sorbitol ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ ရရှိနိုင်မလဲ။
sorbitol ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
သောက်သုံးရန် ၅ဂရမ်ပါ အထုတ်များ။
သောက်ဆေး (သို့) စအိုထည့်သွင်းရန် ၇၀%ပါ ဖော်ရည်
sorbitol ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့လျှင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံး သောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုလျှင် လွတ်သွားသည့်အကြိမ်ကို ကျော်၍ ပုံမှန်အချိန်တွင်သာ သောက်သုံးပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။